Nhau - Nei Tichisarudza Kutungamira Fluid Yakakwira Pressure Syringe Pump
Nei Tichisarudza Kutungamira Fluid Yakakwira Pressure Syringe Pump
Kutungamira Fluid murabhoritari sirinji pombi anoshandiswa zvakanyanya mu microfluidics, yakakwira-magetsi electrospinning, akanaka makemikari, petroleum, biopharmaceuticals, nharaunda, uye masainzi ekutsvagisa masayendisiti nedzimwe nzvimbo.
Nekuwedzera kwekushandisa kwekuyerera kemesitiri, mamiriro ezvinhu ekugadzirisa maitiro ari kuramba achiwedzera kuomarara, uye mhando dzezvinhu zvinofambiswa zviri kuramba zvichiwedzera. Paunenge uchishandisa echinyakare yakadzvinyirira inogara ichiyerera pombi, nekuda kwehukuru hwechimiro chayo, iyo yekupinda uye yekubuda cheki mavharuvhu anowanzo kuve akashatiswa, haigone kushanda zvakajairika, zvichikonzera kusagadzikana uye isina kukodzera chikafu kuyerera. Panguva imwecheteyo, kana uchinge wasangana neascous corrosive liquid zvinhu, iyo-nzira vharuvhu yakaoma kuvhara zvakanaka uye inorasikirwa nebasa rayo, iro rinotadzisa zvakanyanya kufambiswa kweiyo viscous zvinhu. Kuti uenderane nekukurumidza kukura kwekuyerera kwemakemikari mafomu, wedzera chiyero chekushandisa, uye takura mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa, kuitira kuti vatengi vashandise zvigadzirwa zvehunyanzvi uye zviri nyore, chengetedza nguva, zviwanikwa, uye masimba, Tungamira Fluid yakaparura nyowani yepamusoro-yekumanikidza sirinji pombi.
Tungamira Fluid yakaburitsa zviri pamutemo nyowani chaiyo-yekumanikidza sirinji pombi-TGD01 nhasi. Iyo yakanyanya-kumanikidza sirinji pombi inogona kubata sirinji (gasi yakasimba sirinji) ye0,5μl ~ 140ml yakatarwa. Iyo huru hombe dhizaini inokodzera kuendesa kweiyo viscous zvinwiwa, kemikari reactor kuyedza, mushonga uye kemikari engineering. Uye mamwe maindasitiri.
Lead Fluid TGD01 iri imwechete-chiteshi yakakwira-yekumanikidza sirinji pombi ine yakakwira-tsananguro LCD inobata skrini yekushanda. Inofambisa inopfuura 200lbs (91kg) yakatwasuka yakakwenenzverwa munzvimbo dzakasiyana siyana dzekuyerera uye inotsigira mashanu mashandiro enzira senge yekumisikidza uye kubvisa. RS485 kutaurirana, kutsigira Modbus protocol, kuwanda kwemagetsi kuwanda, inokodzera kutepfenyura-chaiyo yezvinwiwa (kusanganisira yakakwira viscosity).
• Yakarurama uye inotsvedzerera kuyerera kwero
• Inogona kutakurwa nesirinji yesimbi isina simbi yekumanikidza kwakanyanya kana kutapurirana kwemvura
• Kurongeka uye kugadzikana kwejekiseni remvura
• Simba-pasi ndangariro basa
• Zvakareruka kune zvakaoma zvirongwa zvehurongwa zvinogona kuitwa pasina komputa
• Yakakura yekupinza jekiseni
• Inoparadza zvakanyanya jekiseni remvura
• Yakakwira viscosity yemvura jekiseni
• Micro yakakwira chaiyo jekiseni
Sveta jekiseni mumudziyo wakamanikidzwa
TGD01 inokodzera sirinji 0.5ul-140ml, kumhanya kunoenderana 1μm / min～190mm / min
Saizi yesirinji: 0.5μl ～ 140ml
• kuyerera renji: 3.06pl / min （0.5μl sirinji） ～ 215ml / min （140ml sirinji）
• Kushanda modhi simbisa, bvisa, simbisa / bvisa, bvisa / simbisa, inoenderera nzira
• Chiteshi: 1
Stroke yepombi: 140mm
• Pusher inofambira mberi pa microstep: 0.156μm / μstep
• Linear kumhanya: 1μm / min ～ 190mm / min
Linear yekufamba kwakarurama: kukanganisa ＜ ± 0.35% (＞ 30% yepombi sitiroko)
• Kutambanudza Max: 91kg （100% kukanda）
• Kukanda mutemo: 1% ～ 100% zvekupokana zvinogadziriswa
• Sirinji kusarudzwa: yakavakirwa-mukati main vagadziri, iyo huru modhi sirinji yekusarudza; Unogona kushandisa tsika sirinji, yakananga yekuisa sirinji saizi uye dhayamita
Kuyerera calibration: kuburikidza neyakagadziriswa nzira kuti uwane yakawedzera huwandu hwemvura
Ratidza: 4.3-inch color LCD ine skrini yekuratidzira uye kuwedzerwa vhoriyamu, yakasara fluid vhoriyamu, kuyerera, mashandiro enzira, sirinji yakatarwa, nezvimwewo
• Operation mode yekubata skrini uye bhatani
Simba rekudzima ndangariro: kuchengetedza iyo inomhanya parameter otomatiki
Kutaurirana kwekukurukurirana: RS485, Modbus Protocol
Kudzora kwekunze: External signal control start and stop, status signal output
Magetsi: AC100-240V, 50-60Hz
Nzvimbo yebasa: tembiricha 5 ～ 40 ℃, Hunyoro hune hukama <80%
Dhivha: 305 × 222 × 190 (mm)
• IP giredhi: IP31
• Zvinhu zveShell: jira resimbi
• Kurema: 6.6kg
Post nguva: Chivabvu-24-2021